Fanontaniana: Inona no atao hoe Cc amin'ny bisikileta
Ny fahafahan'ny motera môtô dia refesina amin'ny lafiny toratelo. Ny fahaiza-manao cubic, fantatra amin'ny anarana hoe "cc" amin'ny fiara, matetika dia eo anelanelan'ny 50cc ka hatramin'ny 1500cc. Izany koa
Ahoana no hampitomboana ny sandan'ny mpizara amin'ny Mikes Bikes
Mba hampitomboana ny hasarobidin'ny mpandray anjara dia tsy maintsy: Mampitombo ny tombombarotra; Manamaivana ny fampiasam-bolan'ny mpizara; Ahena ny trosa; ary.Paikady hampihenana ny fandaniana: Ahena ny tahiry. Ahena ny vidin'ny vokatrao. Ahena ny fandaniana amin'ny famokarana. Mifantoha amin'ny
Fanontaniana: Inona no atao hoe Bmx Bikes
Na dia mitovitovy aza izy ireo, ny bisikiletan'ny ankizy sy ny bisikileta BMX dia tena hafa. Ny bisikileta BMX dia natao ho an'ny mpitaingina fika, mitsambikina, stunts, an-tanàn-dehibe
Aiza no hanomezana bisikileta akaiky ahy
Manome ny bisikiletanao taloha amin'ny antony tsara Mety ho azonao atao ny manome izany any amin'ny fivarotana fiantrana lehibe kokoa, fa anontanio izy ireo raha afaka manaiky izany izy ireo.
Valiny haingana: Haingam-pandeha ny bisikileta elektrika
Haingana ve ny mandeha bisikileta elektrika? Raha mandeha pedal ianao dia afaka mandeha haingana araka izay azonao atao. Na izany aza, ny ankamaroan'ny bisikileta dia mijanona tsy manome fanampiana elektrika
Ahoana no hanesorana ny harafesina amin'ny bisikileta
Ahoana ny fanesorana ny harafesina amin'ny bisikileta! Afangaro ny soda sy ny vinaingitra ao anaty paty dia asiana ranom-boankazo kely. Amin'ny fampiasana borosy, apetaho amin'ny rehetra ny paty
Posted on Jolay 12, 2014 Septambra 15, 2021 By Danna No Comments amin'ny fiarovan-doha bisikileta: safidy, habeny, maha-zava-dehibe